Etu esi enweta Pinkémon Shiny niile | Gam akporosis
Ignacio Sala | 10/07/2021 18:00 | Egwuregwu gam akporo, Pokémon Go
Pokémon Go bụ otu n'ime aha mkpanaka kachasị n'ụwa. Site na ọtụtụ nde ndị egwuregwu kwa ụbọchị, egwuregwu na-ejikọ ijide Pokémon na ụwa n'ezie. Shiny Pokémon bụ ụkọ dị na Pokémon GO, mana ekele maka ntuziaka a, anyị ga-enyere gị aka ịkwalite usoro gị Weghara Shiny Pokémon.
Pokémon GO gbawara na ewu ewu na 2016, ebe ndị nkuzi Pokémon gara n'okporo ámá ma weghara ya 151 Pokémon dị. Ndị na-egwu egwu ga-enyocha gburugburu ụwa ha n'ezie iji chọta Pokémon zoro n'ugwu dị elu, oke ọhịa, ma ọ bụ n'akụkụ ụlọ ha.
1 Kedu ihe bụ Shiny Pokémon na Pokémon Go?
2 Typesdị niile nke Shiny Pokémon
2.1 Ọgbọ 1 nke Shiny Pokémon
2.2 Ọgbọ 2 nke Shiny Pokémon
2.3 Ọgbọ 3 nke Shiny Pokémon
2.4 Ọgbọ 4 nke Shiny Pokémon
2.5 Ọgbọ 5 nke Shiny Pokémon
2.6 Ọgbọ 6 nke Shiny Pokémon
3 Etu esi enwu Pinkémon Shiny na Pokémon GO
4 Ndụmọdụ maka ịnweta Pinkémon Shiny
5 Aghụghọ iji jide Shiny Pokémon
Kedu ihe bụ Shiny Pokémon na Pokémon Go?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Shiny Pokémon bụ ụdị dị iche iche. Enwere naanị otu agba dị iche iche na-egbu maramara kwa Pokémon. Fọdụ ọdịiche doro anya, dị ka Gyarados Shiny, nke na-acha uhie uhie kama acha anụnụ anụnụ. Ndị ọzọ dị aghụghọ karị, dị ka Shiny Bulbasaur ma ọ bụ Squirtle, nke bụ otu agba mana obere ndo dị iche.
Pokémon niile nwee ụdị Shiny dị iche iche, ma na Pokémon Go, Shiny Pokémon na-emeghe n'oge Communitybọchị Ọha ma ọ bụ ihe omume ndị ọzọ pụrụ iche ma ọ bụ site na mmelite mgbe niile nke aha a na-enweta.
Ọ bụrụ na Shiny anaghị emeghe, n'agbanyeghị ole Pokémon ahụ ị jidere, ị gaghị ahụ Pokémon na-egbuke egbuke. N'aka nke ọzọ, ozugbo emeghechara ya, Shiny Pokémon bụ ihe a na-ahụkarị na Pokémon Go karịa na egwuregwu ndị bụ isi, ọkachasị n'oge mmemme.
N'agbanyeghị nke ahụ, ha dị obere, yabụ nhọrọ kachasị mma iji chọta Pokémon Shiny bụ ijide Pokémon ọ bụla na-apụta. Ule maka Shiny na-ewe oge, mana ozugbo ị matara ụdị ndị nwere ike na-egbu maramara, ọ dị mfe karị.
Typesdị niile nke Shiny Pokémon
Ọgbọ 1 nke Shiny Pokémon
Ọgbọ 2 nke Shiny Pokémon
Ọgbọ 3 nke Shiny Pokémon
Onye na -akwa akwa
Ọgbọ 4 nke Shiny Pokémon
Ewu egbu egbu
Ọgbọ 5 nke Shiny Pokémon
Onye na -enweghị mmasị
Ọgbọ 6 nke Shiny Pokémon
Etu esi enwu Pinkémon Shiny na Pokémon GO
Pokémon na-egbuke egbuke bụ Pokémon nwere ụdị agba dị iche iche ma e jiri ya tụnyere ụdị mbụ ha. Iji maa atụ, Pokémon dị ka Trapinch na-abụkarị oroma na-enwu gbaa mgbe ọdịdị ya na-enwu gbaa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.. E wezụga agba, ọ nweghị ihe pụrụ iche pụrụ iche gbasara ihe ndị ae kere eke.
Agbanyeghị, Shiny Pokémon dị oke ụkọ ịchọta. Introduceddị ndị na-enwu gbaa bụ ndị e webatara n'usoro nke abụọ na Pokémon Gold na Silver, mgbe ndị egwuregwu nwere ike ijide Gyrados Shiny na ọdọ mmiri nke oke iwe.
Na Pokémon Go, Ọnọdụ nke ịbanye n'ime Shiny Pokémon dị 1 na 450. Enwere oge ụfọdụ n'egwuregwu ahụ mgbe ohere ị na-agba n'ime otu na-abawanye ụba.
Ihe mbụ ịmara tupu ị gaa ijide Shiny Pokémon bụ na e nwere ụzọ isii dị iche iche jikwaa weghara ụdị Shiny dị na Pokémon GO:
Na ọrụ nyocha
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga nke ọma na njide ejidere anyị, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime chere maka ubochi Community na emere ọnwa na Pokémon Go, ka anyị si kọwaa ma emesịa.
Ndụmọdụ maka ịnweta Pinkémon Shiny
El Communitybọchị obodo Ọ bụ ihe omume na - eme otu ugboro n'ọnwa na Pokémon GO. N'oge Communitybọchị Ọha, otu Pokémon doro anya ga-eme ka ọnụọgụ ọnụọgụ gị maka obere oge. N'oge a, Pokémon ga-apụta ọtụtụ ugboro na eserese ahụ yabụ ohere ị ga-ahụ Pysimmon Shiny dị elu.
Ndị na-egwu egwu ekwuola na ha bụ 10-20 Shiny Pokémon kwa ụbọchị. Maka ndị na - ebido ebido, ohere ka ukwuu ị ga - ezute Pokémon Shiny n’oge Community Community nwere ọtụtụ ihe ị ga - eme na ọnụọgụ nke ịnwa ijide Pokémon.
Iji chọtakwuo Pokémon na-egbuke egbuke, kama ijide Pokémon ọ bụla na-egosi, ị ga-agbapụ n'ọgụ ma gaa n'ihu Pokémon ọzọ. Nke a na-enye ndị egwuregwu ohere rlelee Pokémon ọ bụla ruo mgbe ịchọta otu Shiny. Ọzọkwa, ụfọdụ Pokémon Legend nwere ike ịnwe ụdị dị iche iche nke Shiny mgbe ha na-alụ ọgụ na mwakpo.
Shinzọ na-egbu maramara Ọ ga - apụta naanị mgbe o merisịrị Pokémon n'ọgbọ agha. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmara na ọ bụghị Pokémon niile nwere ụdị Shiny. Iji mee ka ohere nke Pokémon na-egbukepụ egbukepụ n'oge mwakpo, mwakpo ahụ ga-achọ ịme oriri zuru oke.
Ọ na-atụ aro ka raids nke banyere 20 egwuregwu, nke na - eme ka ọnụọgụ nke ohere ịchọta ụdị dị iche iche nke Pokémon. Shiny Pokémon nwekwara ọnụọgụ ọnụọgụ 100%, yabụ ịkwesịrị ịnọ n'akụkụ nchebe iji jide ya.
Aghụghọ iji jide Shiny Pokémon
Jiri ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ na mee ka ọnụ ọgụgụ nke Pokémon dịkwuo elu. Ka ọ dị ugbu a, n'ihi ọnọdụ gbara COVID-19 gburugburu, Pokémon GO emeela ka ọnụ ahịa ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ belata iji mee ka ọ dịrị ndị egwuregwu egwu igwu egwu n'ụlọ.
Jiri Frankincense mgbe iji mee ka ohere nke izute Shiny Pokémon dịkwuo elu. Shiny Pokémon jidere n'oge Community Community dị oke ụkọ, n'ihi na ha nwere ike ịbịa njem pụrụ iche mgbe ha gbanwere n'oge ụbọchị Community.
Ihe mgbaru ọsọ kwesịrị ịbụ mgbe niile ijide ma ọ dịkarịa ala 3 Pokémon na-egbuke egbuke n'oge Communitybọchị Ọha. Ọ bụrụ na a Pokémon nwere atọ dị iche iche Na mgbanwe mgbanwe ya, ịnwe nke ọ bụla dị mma maka igosipụta Shiny Pokémon.
Pokémon na-egbuke egbuke ha dị mma n'ezie maka ihe ọ bụla karịa igosipụta. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ụdị dị iche iche na-egbu maramara ka a na-egbutu site n'otu ụkpụrụ ahụ, dịka ọmụmaatụ Rayquaza nwere ọdịdị ojii na nke gbara ọchịchịrị, ebe Pikachu nwere agba odo dịtụ iche.
Onye ọ bụla na-enwu gbaa nwere ọdịdị nke ya, nke na-eme ka ha pụọ ​​iche n’oge ọ bụla ha pụtara. Ọzọkwa, oge ọ bụla otu n’ime ha pụtara n’egwuregwu ahụ, ọ nwere ọmarịcha animation yabụ ọ na-enye afọ ojuju ịgbakwunye ihe ndị a dị obere na nchịkọta gị, ọkachasị mgbe onye ọkpụkpọ ahụ sụrụ ngọngọ na Pok’emon na-egbuke egbuke n’enweghị mbọ.
Enwere n'ozuzu obodo gburugburu Pokémon egwuregwu ndị raara onwe ha nye ịchụ nta Pokemon Shiny, yabụ ọ bụrụ na ị bụghị akụkụ nke obodo ndị a, ị kwesịrị ịmalite ịme ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ gbasaa nchịkọta gị nke Shiny Pokémon.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Etu esi enweta Pinkémon Shiny niile